के पौडेलले खोसेकै हुन् त जोशीको पार्टी सदस्यता ? केको बदला लिएका हुन् त ? पढ्नुहोस्::Nepal's Online News Portal
के पौडेलले खोसेकै हुन् त जोशीको पार्टी सदस्यता ? केको बदला लिएका हुन् त ? पढ्नुहोस्
२५ पुस । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीसँग बदला लिएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिएर पूर्वसहमहामन्त्री जोशीसहितका नेताहरूलाई कारबाही गराइ छाडेका हुन् ।
व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण पौडेलले जोशीको कांग्रेसको सदस्यता खोसिदिएका हुन् । कांग्रेसभित्र पौडेल सानो चित्तको नेताका रुपमा परिचित छन् । गुटका नेताहरूले समेत छाड्दै गैरहेका बेला पौडेलले देखाएको यो चरित्रको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
पुस २४ गते कांग्रेस मुख्यालयले लेखेको पत्र तनहुँ कांग्रेसका सभापति जितप्रकाश आलेलाई पठाइएपछि जोशी सहितका नेताहरू कारबाहीमा परेका हुन् । कांग्रेस मुख्यालयबाट पुगेको पत्रमा जोशीसहितका नेताहरूलाई कारबाही गरिएको तथा पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरिएको उल्लेख छ ।
कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले तनहुँ कांग्रेसलाई पुस २४ गते पत्र पठाएका थिए ।
निर्वाचनका बेला विद्रोही उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकसहितका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गरिएको पत्र पठाएका हुन् ।
पत्रमा कारबाही गरिएका नेताहरूको नाम छैन । तर, तनहुँ कांग्रेसले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लागेकाहरूको सूची बनाएर कारबाहीका लागि केन्द्रमा पठाएको थियो ।
जोशीले पौडेललाई आफ्नो क्षेत्रमा आएको भन्दै विद्रोही उम्मेदवारी दिएका थिए । पौडेलले जोशीविरुद्ध अदालतमा उम्मेदवारी खारेज गर्न मुद्धा दिएका थिए । अदालतले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्धा चलेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।
पत्रमा नाम उल्लेख नरहेपनि पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता गोविन्दराज जोशीको कांग्रेसको साधारण सदस्यता नरहेको जनाइएको छ ।
निर्वाचनमा वरिष्ठ नेता पौडेल आफ्नो क्षेत्र छाडेर गोविन्दराज जोशीको क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसपछि तनहुँ कांग्रेसभित्र विवाद भएको थियो । आफ्नै क्षेत्रमा पौडेल कमजोर मानिन्छन् ।